कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ भारतले किन दियो यति धेरै महत्व ? - samayapost.com
कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ भारतले किन दियो यति धेरै महत्व ?
समयपोष्ट २०७४ फागुन ५ गते १३:४१
नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीप्रति छिमेकी र अन्य मित्र राष्ट्रहरुले यतिखेर बधाईको ओइरो लाएका छन् । छिमेकी देशले त उहाँसँग मिलेर कामगर्न आफूहरु उत्साही भएको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त उहाँलाई कतिपय विदेशी सञ्चारमाध्यमले नेपालका आठौँ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री तथा बामपन्थी गठबन्धनबाट बहुमत प्राप्तगरी नेपालको कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्वमा पुग्नुभएको भनी टिप्पणी पनि गरेका छन् ।
यी औपचारिक बधाई र शुभकामनाका अतिरिक्त नेपाल र भारतबीच यसपटक नयाँ कूटनीतिक प्रयोग नै भएको केहीको टिप्पणी छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभन्दा महिना दिनअघि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई फोन गरेर भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा बधाई दिनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा भारतमा स्वागत गर्न आफू आतुर रहेको भन्दै भ्रमणको निम्तो पनि त्यतिबेलै दिनुभएको थियो । उहाँले फोन दुई पटक नै गर्नुभयो प्रधानमन्त्री नबन्दै । पछिल्लो सम्पर्कमा पनि उहाँको आसय भारत भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्नु नै थियो ।
चीन सरकारले स्वागत गरेसँगै चिनियाँ विभिन्न संघसंस्था एवम् व्यक्तिले पनि उहाँलाई स्वागत र बधाई ज्ञापन गरेका छन् । चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरुले नेपालमा बामपन्थी गठबन्धनको रुपमा निर्माण भएको कम्युनिष्ट सरकार भनेर प्रचार गरेका छन् । चीनको एक अर्धसरकारी ‘थिंकट्यांक’ संस्था सान्सी इन्स्टिच्युट अफ इनोभेटिभ ट्यालेन्ट डेभलपमेन्ट सेन्टरले नेपालमा ओली प्रधानमन्त्री भएकोमा बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेको छ । उक्त इन्स्टिच्युटको द सेन्टर अफ साउथ एसियन ट्यालेन्ट डेभलपमेन्टका निर्देशक प्रा.डा.राजिवकुमार झाले ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै बिहीबारै एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी ओली नेतृत्वको सरकारका समयमा द्धिपक्षीय हितका धेरै कुराहरु अघि बढ्ने र विगतमा उहाँले चीनसँग गरेका सन्धी सम्झौताहरुले पनि पूर्णता पाउने अपेक्षा चिनियाँ बुद्धिजीवी बर्गले गरेको बताउनुभएको छ ।
नेपालको भूराजनीतिक अवस्थितिलाई नियाल्दा छिमेक सम्बन्ध अति महत्वपूर्ण र संवेदनशिल छ । यसको सन्तुलित सञ्चालनबाट मात्र नेपाल र नेपालीलाई फाइदा छ । दक्षिणी छिमेकीसँग हाम्रो आँगन नै जोडिएकोले हामी सदियौँदेखि विभिन्न हिसाबमा नजिक छौँ । उसको उपेक्षाबाट एक हिसाबले भन्ने हो भने हाम्रो दैनिकी चल्न नै गाह्रो छ । उत्तरको छिमेकी चीन त झन विश्वको पहिलो अर्थतन्त्रको दौडमा छ । यति समृद्ध छिमेकी पाउनु हाम्रालागि पनि गर्वको कुरा हो । त्यसैले उसँगको ठोस सहकार्यबिना पनि हामीले सोचेको समृद्धिको प्राप्ति सम्भव नहुन सक्छ ।